'Uma dulqaadanayno Takoorid.' Maamulaha Shirkada Diyaaradaha ee American Airlines ayaa Ka Jawaabay Digniinta NAACP ee Rakaabka Madow - TELES RELAY
'Uma dulqaadanayno Takoorid.' Maamulaha Shirkada Diyaaradaha ee American Airlines ayaa Ka Jawaabay Digniinta NAACP ee Rakaabka Madow
By TELES RELAY On Déc 16, 2019
Tobannaan sano, alaabada caruurtu ku ciyaaraan ee caqliga badan waxay ka koreen warshado aad u fiican ilaa ganacsi faa iido leh. Sida laga soo xigtay shirkadda falanqeeyaha fadhigeedu yahay UK ee Juniper Research, iibinta toy caqliga leh ee sanadlaha ah ee adduunka oo dhan ayaa la rajaynayaa inay ku korto $ 11.3 bilyan by 2020. Maanta, dukaamada carruurtu ku ciyaaraan ma ahan oo keliya inay leeyihiin noocyo fara badan oo loo yaqaan 'Board board' iyo xayawaanno cufan, laakiin sidoo kale aalado internet ku xiran, gawaarida orodka casriga ah iyo diyaaradaha drones-ka, burooyinka dhismaha ee caqliga leh, iyo xitaa robotiyada carruurta bara sida loo codeeyo.
Waxaan aragnay fursad aan ku biirineyno waxbarashada oo aan ku wada ciyaarno Mi Bubot Builder, oo ah dhisme iyo koodh toy robotic ah, kaas oo u oggolaanaya carruurta inay horumariyaan koodh u gaar ah oo ay u dhisaan moodallo kala duwan iyagoo adeegsanaya fikirka hal abuurka. Dhismeyaashayada Mi Robot, ayaa dhowaan laga heli karaa Amazon, mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee aan ugu darnay suuqa toy smart. Robot Builder waxaa soo saarey mid kamid ah nidaamkeena Eco Aiqi, waa shirkado diirada saaraya agabka caqliga badan iyo waxyaabaha robotic.
Caruurta jecel roboticsiga, toykan runti waa daaweyn. Waxay la timid burush 978 oo laga sameeyay qaab dhismeedka gudbinta makaanikada si loo hubiyo dhaqdhaqaaq waxtar leh iyo ficil. Waxaa meel fog laga maamuli karaa barnaamijka 'Mi Robot Builder' ee loo maro Bluetooth. Adigoo si fudud u jiidaya kana tuuraya koodhadhka amarrada adag ee robotka ee taleefanka gacanta ee ku xiran, carruurtu waxay amri karaan robotka seddex jaangooyooyin xakameyn joystick, jimicsi iyo xakameyn waddo waxayna sidoo kale abuuri karaan tilmaamo u gaar ah robotku inuu raaco.
[bs-quote quote = ”Weligaa noloshaada ma beddeli doontid illaa aad wax ka beddelayso wax aad maalin walba qabato. Sirta guushaada waxaa laga helaa hawl maalmeedkaaga. "Style =" style-23 ″ align = "left" color = "# 000000 ″ author_name =" Darren Hardy "author_job =" Qoraa Mareykan ah "author_avatar =" / wp / wp-content / uploads / 2019/12 / majaladda-internetka -quote-avatar.png »]
Caruurta jecel roboticsiga, toykan runti waa daaweyn. Waxay la timid burush 978 oo laga sameeyay qaab dhismeedka gudbinta makaanikada si loo hubiyo dhaqdhaqaaq waxtar leh iyo ficil. Waxaa laga saari karaa iyadoo lagu maamuli karo barnaamijka 'Mi Robot app Builder' iyadoo la adeegsanayo ilkaha buluugga ah. Adigoo si fudud u jiidaya kana tuuraya koodhyada amarrada adag ee robotka ee taleefanka xariifka leh ee isku xirka, carruurtu waxay ku amri karaan robotka seddexda goobood ee xakamaynta joystick, iyo xakamaynta wadada.
Dhismaha Mi Robot waxaa loo isticmaali karaa moodooyin kala duwan oo ay ku jiraan robot, diinosaur, iyo diyaarad. Qaabkasta wuxuu gaari karaa isku-dheelitirkiisa, mahadi maha processor caqli gal ah oo soo saare taxane istiraatiijiyad dheellitiran oo wadnaha sheyga ah, u ogolaanaya robotku inuu had iyo jeer ahaado mid toosan oo fuliya talaabooyin isku dubbaridan, ha ahaato mid taagan ama mid taagan. dhaqaaqa. Robotku wuxuu sidoo kale la yimaadaa afar dekedaha nooca USB-nooca ah, kuwaas oo awood siiya robot-ka isla markaana taageeraya qaybo ka guban kara culeyska culeyska 3 kg.
Sidee ayaad tan ugu isticmaali kartaa barashada luqadda?
Soo diyaarso kaararka loo yaqaan 'flashcards' oo lagu xasuusto ereyada ama naxwaha.
Maskaxda si fiican ugu dadaal si aad u dhaqaaqdo jawaabta hanjabaadda jirkaaga.
Fiiri qayb ka mid ah kaararka flash. Ha isku qabadin naftaada marxaladdan.
Dib u eeg isla qaybta, hadda ku dar isugeynta eray kasta oo erey ah.
Waqti xoogaa ku qaadatid barashada kaarka ka hor intaadan u dhaqaaqin kan ku xiga.
Tobannaan sano, alaabada caruurtu ku ciyaaraan ee caqliga badan waxay ka koreen warshado aad u fiican ilaa ganacsi faa iido leh. Sida laga soo xigtay shirkadda falanqeeyaha fadhigeedu yahay UK ee Juniper Research, iibinta toy caqliga leh ee sanadlaha ah ee adduunka oo dhan ayaa la rajaynayaa inay ku korto $ 11.3 bilyan by 2020. Maanta, dukaamada carruurtu ku ciyaaraan ma ahan oo keliya noocyo cayaaraha caadiga ah iyo xayawaanka cufan laakiin sidoo kale aaladaha ku xiran internetka, gawaarida orodka casriga ah iyo diyaaradaha drones-ka, burooyinka dhismaha ee caqliga leh, iyo xitaa robotiyada carruurta bara sida loo codeeyo. Waxaan aragnay fursad aan ku biirineyno waxbarashada oo aan ku ciyaarno Miisaaniyadda Dhismaha Mi Robot, oo ah dhisme iyo koodh robotic.
Gawaarida quwadda sare, marka lagu daro kumbuyuutaro ku dhexjira koronto, wuxuu u ogolaanayaa robotku inuu lahaado xawaare sax ah iyo jihada. Sidaas darteed, haddii wadidda gawaarida la joojiyo, habka ilaalinta ayaa si otomaatig ah loo kiciyaa si looga ilaaliyo in mooshinku xad-dhaaf noqdo. Mi Robot Builder wuxuu ku dhiirigeliyaa carruurta inay noqdaan hal-abuureyaal wax dhisa oo wax dhisa. Waxaan rajeyneynaa in horudhacdan hordhaca ah ee tikniyoolajiyada iyo xallinta dhibaatada ay u oggolaan doonto carruurta inay helaan hammad ay u qabaan sayniska iyo tikniyoolajiyadda da'da hore, iyagoo u oggolaanaya inay gartaan in awoodda wax la abuurayo ay ku dhex jirto.
La kulan 29 Sano jir Saynisyahanno Xog-ogaal ah oo Shaqo u Dhigay Shaqo si ay u Noqoto Climber-ga Waqtiga-buuxa
Shirkadda Southwest Airlines ayaa ka xuntahay in rakaab si khasab ah looga saaray diyaarad